ကြုံရတွေ့ရ တစ်ခဏ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကြုံရတွေ့ရ တစ်ခဏ
Posted by နွယ်ပင် on Sep 9, 2011 in Drama, Essays.., Myanma News, News, Short Story | 20 comments
ကွန်ဒိုတွေရဲ့ ပေါ့လျော့လာတဲ့ တာဝန်များ
အခုဖော်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာလေးက အစ်မတစ်ယောက်လို အရမ်းခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးပါ
သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာမို ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ဖော်ပြတာလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
စက်တင်ဘာလ ၆ရက် ၂၀၁၁က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်မရဲ့ ရုံးက ရန်ကုန်မြို့ လပြည့်ဝန်းပလာဇာမှာရှိပါတယ်။ မနေ့ညနေ ၆း၃၀မိနစ်မှာ ကျွန်မရုံးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါးစီးနေရင်းကနေ မီးပျက်သလိုဖြစ်ပြီး ဓါတ်လှေခါးရပ်သွားပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါးထဲမှာတော့ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအစ်မ နှစ်ယောက်ထဲပါပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်လုံး မီးပျက် တယ်ထင်ပြီး စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၂မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ဓါတ်လှေခါးက ပြန်မကောင်းလာတဲ့အတွက် အရေးပေါ်ခလုပ်ကို နှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသံမှ မမည်ပါ။ အဲဒါနဲ့ တံခါးကို အသံမြည်အောင် ထုပြီး အထဲမှာ လူရှိကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ၇မိနစ်လောက်ကြာမှ လုပ်နေတယ် ခနစောင့်ဆိုတဲ့ အသံတစ်ခုကို ကြားရပြီးနောက် အသံတိတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ၁၀မိနစ်လောက်ကြာလာတေ့ာ စိုးရိမ်လာတာနဲ့ လပြည့်ဝန်းပလာဇာ ပိုင်ရှင် ဦးသိန်းရွှေဆီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ လာမကယ်ကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ကို ကူညီရန် ပြောပါတယ်။ ဦးသိန်းရွှေက ရုံးခန်းကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားပေးမယ်။ ပြီးလျှင်ပြန်ဆက်ပေးပါမယ့်ဟု ကျွန်မတို့ကို ပြောပါတယ်။ ဖြစ်ပြီး ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဦးသိန်းရွှေဆီက ဖုန်းလာပါတယ်။ ရုံးဖုန်းက မအားဖြစ် နေတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းဖုန်းပြန်ဆက်ပါတယ်။ သူနေတဲ့ ၇မိုင်ကနေ လပြည့်ဝန်းကို လာမည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ် ၄၅မိနစ်ကြာထပ်စောင့်ရပါမည်။ ဓါတ်လှေခါးထဲတွင် နောက်ထပ် ၄၅မိနစ်တာ အောက်စီဂျင် ရှိနိုင်ပါ့မလားလို့ ကျွန်မတို့အတွေးဝင်သွားပြီး တစ်ယောက်က တံခါးကို ထပ်ထုပြီး တစ်ယောက်က အရေးပေါ်ဌာနကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကယ်ဆယ်ရန် ပြောပါတယ်။ ည ၇နာရီမှာ တံခါးပွင့်လာပါတယ်။ တံခါးပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ လိမ္မော်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင် နှစ်ယောက်၊ နက်ပြာရောင် ယူနီဖောင်းနဲ့ နှစ်ပွင့် တစ်ယောက်အပါအ၀င် အရပ်ဝတ်နှင့် တစ်ယောက်ကို အပေါက်ဝမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဓါတ်လှေခါးနဲ့ ၄လွှာရဲ့ ကြမ်းပြင်ဟာ တစ်တောင်လောက်ကွာနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ခုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ၄လွှာရဲ့ လှေခါးနားမှာတော့ လပြည့်ဝန်းရဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း တစ်ဦးကိုသာတွေ့ရြ့ပီး ကျွန်မတို့အပေါ် ဂရုဏာသက်မှု၊ တာဝန်သိတတ်မှု ဆိုတာ လုံးဝကို လပြည့်ဝန်းရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဆီက မရခဲ့ပါဘူး။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ည၈နာရီလောက်မှာတော့ လပြည့်ဝန်းပိုင်ရှင်ထံမှ ဖုန်းဆက်လာပြီး `ဘရိတ်ကာလေး´ ကျသွားလို့ ဓါတ်လှေပျက်သွားတာပါလို့သာ ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ဆိုတာရခဲလှပါတယ်။ အခုလို ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀က လူတွေရဲ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ် ဆိုတာကို သိစေလိုပါတယ်။ တာဝန်မဲ့မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ကင်းမဲ့မှုမျိုးတွေ ကွယ်ပျောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကျွန်မလည်း ဓါတ်လှေကားထဲ ပိတ်မိဖူးတယ်
ပြီးတော့ အဲဒီဓါတ်လှေကားထဲမှာ ဖုန်းလိုင်းလုံးဝမမိဘူး
အထဲမှာ ကျွန်မရယ် ကျွန်မသူငယ်ချင်းရယ် နောက်ထပ်ဦးလေးကြီးနှစ်ယောက်ရယ်
ကျွန်မကတော့ လိုင်းမမိမှန်းသိတော့ ဖုန်းဆက်ဖို့မကြိုးစားဘူး
ကျွန်မသူငယ်ချင်းလည်း အရေးပေါ်ခလုတ်ကို ခဏခဏနှိပ်ရလို့ ခလုတ်တောင်ပျက်တော့မယ်
နောက်ဆုံး ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လည်း ထောင့်ကပ်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်
အာပြဲကြီးနဲ့ အော်လည်းဘယ်သူမှ ကြားမှာမဟုတ်ဘူး
ဟိုလူကြီးနှစ်ယောက်လည်း ဖုန်းဆက်လို့ မရတာနဲ့ သူတို့အားနဲ့ တံခါးကို အတင်းဆွဲဖြဲတယ်
ဘယ်ရမလဲ ဒါပေမယ့် အခက်အခဲကျနေတော့လည်း ကြိုးစားရတာပဲ
ဟုတ်တယ် ပန်ပန်ရေ အဲ့ဒီပိတ်မိတဲ့ အစ်မနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က
ရောဂါရှိတယ်လေ သူ့ရောဂါက အသက်ရှူမဝရင် စိုးရိမ်ရတယ် နောက် သူတို့ ပိတ်မိတာက
နာ၇ီဝက်လောက်မကဘူး အဲ့အစ်မက မိနစ် (20) လောက်လဲ အထဲမှာပိတ်မိနေရော အသက်ရှူမဝ
သလိုဖြစ်လာလို့ (199) ကို အကူအညီတောင်းလိုက်ရတဲ့ အထိပါပဲ ……..
ဓါတ်လှေကားရှိတဲ့ ကွန်ဒိုတွေကိုဘဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်
ဒါပေမယ့် တလမှာ ၁၆ခေါက်လောက်က ဓါတ်လှေကားပျက်တယ်
ပျက်တိုင်းလဲ ဘယ်တော့မှကြာကြာမခံဘူး မကြာခင်ပြန်ပျက်တာဘဲ
အဲ့ဒိတော့ရုံးမှာ ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် လူတယောက်ဆင်းသွားတာနဲ့
ဒါပေမယ့် တခြားသူတွေကစောင့်ကြည့်ပေးထားတော့ အဲ့လောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးဝါးမဖြစ်ဘူးပေါ့
နောက်တခါ ဓာတ်လှေခါးစီးရင် တပတ်စာ ရေ၊ ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါး၊ တကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းနဲ့ စာအုပ် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပြူတာသယ်သွားကွဲ့။ ဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်အမတ်မင်းဆီ တိုင်ကြားရမှာ၊ အခုတော့ နေရာမှားရောက်နေသလိုပဲ။ နောက်ဆို အဲဒီကိုပဲ တိုက်ရိုက်သွားနော်။
ကျွန်မအရင်ရုံးတုံးကလဲ ဓါတ်လှေကားထဲပိတ်မိလို့ ပါလာတဲ့ယောက်ကျားလေးတွေ အတင်းတံခါးဆွဲဖွင့်လိုက်တာ ပွင့်သွားလို့တော်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကလည်း အပြင်ဘက်ကနေ ပျာပျာသလဲ တံခါးဆွဲဖွင့်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါတောင် ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတယ်။
If you face such trap , do not panic. It is easy to say but try . Remember that at least some one will come and rescue you . Due to the construction ,I don’t think oxygen will gone in the car .
တော်ပါသေးတယ်။မသေကောင်းမပျောက်ကောင်းပါ။ခုလိုမျိုးတာဝန်မဲ့တာတော့ မကောင်းပါဘူး။အချိန်ကြာလွန်းတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာအားနည်းတယ်ပြောရမှာပေါ့
ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ နွယ်ပင်ရေ … ။
ဓါတ်လှေခါးထဲ တစ်ခါမှ မပိတ်မိခဲ့ဖူးပေမဲ့ … ဓါတ်လှေခါးစီးတိုင်း အရမ်းတော့ စိတ်ပူနေတတ်တယ်လေ … ။
ဒီလောက် လူတွေပိတ်မိနေတာကို မျက်နှာလွဲဂဲပစ်လုပ်တဲ့ ဟိုပိုင်ရှင်လူကြီးရော .. ရုံးခန်းကလူတွေရော … သွားရန်တွေ့ပစ်လိုက်ပါလား … ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဓါတ်လှေခါးသုံးတာ ပြသနာမဟုတ်ပေမဲ့ .. ဒီမှာက မီးပျက်လိုက် ၊ လာလိုက်ဆိုတော့ .. အတော်ကသိကအောက်နိုင်လိမ့်မယ် … ။
တကယ်တော့ ပိတ်မိရင် ဖွင့်ပေးရတာ လွယ်ပါတယ် ။ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့သူမရှိဘူး ဖြစ်သွားပုံရပါတယ် ။ ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်သမားပြသနာပေါ့။ထိမ်းသိမ်းမူအားနဲတာလဲပါ ပါတယ်။ ခံရတဲ့သူ ကိုလဲစာနာပါတယ်။
အမလေး ကံကောင်းပေလို.ပါလား… အဲဒီ ကိစ္စက အဲဒီလောက်နဲ. ပြီးသွား သလား မနွယ်ပင် ရယ်..
ဒီထက်ပိုပြီး ဆက်လုပ်သင့်တာ ကိုယ်တာဝန်ကို မသိတာ တော်တော် ခက်တယ်ဗျာ.. ဒါဆို အဲဒီ ကွန်ဒို ဆိုတာကြီးက အလကားပဲပေါ့ ပိုက်ဆံပေးရပြီး ဘာ ၀န်ဆောင်မှု ဘာ အန္တရာယ် ကင်းမှုမှ မရှိဘူး…
အဲလို ကြေအေးလိုက်တော့ အဲဒီလို ဆက်လုပ်နေအုံးမှာ ပဲ………. အောက်တန်းစားတွေဗျာ..
ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အစ်မတွေကတော့ အဲလောက်နဲပဲကိစ္စကို အပြီးသတ်လိုက်ကြတာပါ
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာက seven days ဂျာနယ်တိုက်၇ှိတော့ ဂျာနယ်ထဲ ပါမလားတော့ မပြောတက်ဘူး အဲဒီတွန်ဒီု ပိုင်၇ှင်လူကြီးကတော့ (199) ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကူညီတောင်းလို့ ဆိုလားပဲ သူက တစ်ပြန်ပြန်ပြီး စိတ်ဆိုး စိတ်တိုတော်မူနေပါတယ်တဲ့ …….
သူအချိုးမပြေပဲ ပစ်ထားတဲ့ ကိစ္စကို 199 ဖုန်းဆက် အကူညီတောင်းတာ ကောင်းတယ် … မဟုတ်လျှင် အသက်ထွက်တာတောင် လူသိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး …။ ဓါတ်လှေခါးတပ်ထားပြီး တာဝန်ယူတတ်ရမှာပေါ့နော် … ။
ယနေ့ထုတ် အမှတ်၂၄ရ မော်ဒန် ဂျာနယ်မှာ ပါတယ်။
၇န်ကုန်မြို့လယ် ဈေးဝယ်စင်တာ တစ်ခုမှာ…တဲ့။
´ နာမည်အတိအကျဖေါ်ပြခွင့် ရှိမရှိ သိချင်ပါဧ။် ….´
ဟ ဟ အခုတစ်လော အဲလိုလူတွေ တော်တော်များလာတာပါလား ……..
အတွေ့ ကြုံ သစ်လေး တစ် ခု ပေါ့။
ကိုယ်တွေဆို ဓာတ်လှေခါးထဲရောက်တာနဲ့ သရဏဂုံ ရွတ်တော့တာဘဲ။ အကျင့်ကိုပါနေပြီ။
မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းတာဆိုလို့ ဘာမှမရှိပါလား။ ဟန်အဖြစ်တပ်ထားတာနေမှာ။ပြင်လည်းမပြင်ကြ ပြင်ဖို့
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ နွယ်ပင်ရယ်.. ဓါတ်လှေကားထဲမှာတော့ ကြာကြာ မပိတ်မိဖူးဘူး။
အဲဒီထဲမှာ ပိတ်မိနေတာ နွယ်ပင်တို့ မဟုတ်ပဲ.. ဘာညာကွိကွ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေထဲက တယောက်ယောက်သာ ဆို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ စိတ်ဆိုးတော် မူကြအုန်းမလား..
ဟိုတလောက တော်ဝင်မှာ သူခိုးနဲ့ မှားပြီး ယိုးစွပ်မိတဲ့ ကိစ္စ သတင်းစာထဲမှာတောင် တောင်းပန်ကြောင်း ကြေညာလို့ ကို မဆုံးဘူး။
အဲဒီ လပြည်ဝန်း ပလာဇာက ဓာတ်လှေကား ဆင်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီက အင်ဂျင်နီယာကို စကားစပ်မိလို့ မေးကြည့်တော့ အဲဒီ ပလာဇာ က ဓာတ်လှေကားက သူတို့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးတဲ့ကာလကျော်နေပြီတဲ့ ပလာဇာ ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ပြောထားပြီးထား ၁နှစ်ကျော်နေပြီတဲ့။ သဘောက တော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးပြုပြင် ရမယ်ပေါ့ဗျာ..။ ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင်က မပြင်ပဲထားတာတဲ့.။ မယုံရင် အဲဒီဓာတ်လှေကားမှာ ၀န်ဆောင်မှုသက်တမ်းဘယ်လောက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စာအရင်က ကပ်ထားတာ အခုမရှိတော့ဘူးဆိုပဲ။